ExactTarget Na-ewe Ọrụ Ndị Ahịa na Nnukwu Ọha (Social) | Martech Zone
ExactTarget na-ewe ndị ahịa ahịa nnukwu ọkwa (Social)
Thursday, July 9, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'ụtụtụ a, enwetara m email site na ndị folks na Kpọmkwem Ngwaọrụ nke ahụ kwuru na ọnụ ụzọ ndị ahịa ha kwalitere iji tinye njikwa ikpe. Nke a abughi obere ọnụ ụzọ ndị ahịa ọ bụla! ExactTarget 3sixty bụ netwọọdụ mmekọrịta ndị ahịa na - arụ ọrụ zuru oke nke jikọtara na njikwa ikpe, Nkwado ngwaahịanwere Ọbá akwụkwọ ọzụzụ na forums maka ndị ahịa iji nyere ibe ha aka.
M ruru Kpọmkwem Ngwaọrụ taa ma ị nwere ike ịsị na ha bụ mkpọtụ na ikuku! Jeff Rohrs, Mitch Frazier na Stephanie Zircher zitere m ụfọdụ ezigbo ozi yana ụfọdụ ama ama. Ekele na-aga Stephanie na mwepụta a… ọ dị ịtụnanya mgbe m na-arụ ọrụ n'ofe ya ma ọ kwesịrị otuto na ndị otu ya na nkwalite a dị ịtụnanya.
3sixty nwere ugbu a karịa ndị òtù 13,000
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 ndị ahịa tụrụ aro maka ngwaahịa ahụ ka emepụtara site na nzaghachi na 3sixty
Nkwado ngwaahịa ụwa 24-7? online site na BackOffice + nkwado ekwentị site na Successga nke Ọma Ndị Ahịa
Oghere ndị na-enye ọrụ email nwere ezigbo asọmpi. Ọ bụ ezigbo echiche-nke ExactTarget itinye uche na nkwado ndị ahịa na ọrụ ndị ahịa. Nwere ike izipu email site na ọnụọgụ nọmba nke ndị na-enye ọrụ email na ịntanetị… ọ dị ka 1 na-apụta kwa izu ugbu a. ExactTarget egosipụtawo ọdịiche dị iche na ọtụtụ ESP site na iji ike iji mee ka ozi ederede ahaziri iche na usoro nhazi ozi kachasị ngwa ngwa na ngwa ngwa na ụlọ ọrụ ahụ.
Ebe arụ ọrụ na ExactTarget, M nwere ike ịgwa gị na ọ bụ otu n'ime ndị kasị nwee nkà na ụlọ ọrụ na-eduzi nke ọma na Indianapolis. Enwere m nkwanye ùgwù kachasị maka otu ebe ahụ ma nwee oge mụ na ụlọ ọrụ ahụ nọrọ.
Nke a bụ n'ezie nnukwu ọdịiche dị n'ọma ahịa… ụlọ ọrụ na-akwalite ikike ya ijere ndị ahịa ha ozi, ọ bụghị naanị inye ha ngwaahịa. Edeela m tupu oge ahụ isi ihe na SaaS abụghị naanị ikpo okwu - mana na-enyere ndị ọrụ aka ịkwado ikpo okwu.
3sixty aburula ebe achoro ka ndi ahia ahia ka ha na ndi ozo ha kparita uka banyere ahia ugbua ma obu juo anyi ajuju banyere ngwanro a, oru ya ma obu nsogbu obula ha na aru ugbua na ngwa a,? '' Stephanie Zircher, ezi enyi na ExactTarget Director nke 3sixty kwuru. Mmeghe nke BackOffice na 3sixty na-enye sọọsọ ụlọ ọrụ ịkparịta ụka n'socialntanet na-eweta naanị otu ụlọ ọrụ na-enye ndị ahịa naanị ọzụzụ, arịrịọ nkwado na mmekorita n'ịntanetị.
Ewezuga arụmọrụ dị egwu, njiri nke ngwaahịa a bụ ọpụrụiche - yana atụmatụ ọ bụla dabara nke ọma na ngalaba nke ya. Ọ bụ ngwa mara mma:
IMHO, nnukwu ụlọ ọrụ nwere nnukwu email agaghị enweta onye na-eweta ọrụ email ka mma n'ahịa. E nwere ụfọdụ ndị asọmpi dị ukwuu n’ebe ahụ, mana ExactTarget bụ ọkacha mmasị nke obodo.
Jide n'aka na ị gụọ akwụkwọ Mgbasa ozi dum na ExactTarget's BackOffice.
Tags: isa isalaura egburuime nnyocha
Kedu onye na-akọwa teknụzụ na ụlọ ọrụ gị?
Mee ka okporo ụzọ Blog dịwanye elu site na ịgbalite akwụkwọ ochie Blog
Jul 10, 2009 na 9: 52 AM
ị nwetere ya . enwere ndị asọmpi n'ahịa mana .. ExactTarget> ndị ọzọ
Jul 11, 2009 na 10: 13 AM
Akwa post. Anọ m na-eji egwu egwu ọnwa ole na ole ma enwere m ụfọdụ nsogbu na ya na otu n'ime saịtị m na-arụ ọrụ. O were ọnwa ole na ole iji dozie nsogbu nsogbu. Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa na onye nrụpụta ọrụ ka o kwere mee, agbanyeghị na ha na-ala azụ ka ndị mmepe ha leba anya na nsogbu a.
Jul 13, 2009 na 1:37 PM
Daalụ maka ụdị okwu banyere ExactTarget. Anyị niile nwere obi ụtọ maka ihe anyị na-aga n'ihu na-emezu ebe ahụ. Stephanie bụ kpakpando nke na-enweghị atụ. (ezigbo uto na egwu)
Ọrụ na nkwado bụ ikekwe otu n'ime akụkụ ndị kachasị nwee ekele maka SaaS. Taa, azụmaahịa niile buru ibu na-adabere na ngwanrọ ha dị ka ozi dị oke mkpa. Ọ nwere ike ịhapụ ịhapụ ohere, ma ọ bụ enweghị ntụkwasị obi nke ụlọ toro eto na-enweghị onye n'azụ gị. Dị ka Scott McCorkle si kwuo, nke a ga-abụ 'mgbe niile'
Jul 13, 2009 na 2:29 PM
Bet nzọ, Chris! Echere m na ị bụ nnọọ eziokwu banyere ọrụ na nkwado na-n'okpuru-enwe ekele. Na kudos na Scott McCorkle - ọ bụ nnukwu mmadụ ma 'tụgharịa ụgbọ mmiri' ma na-aga ExactTarget na nnukwu ụzọ. Akwa ndị nọ ebe ahụ!